Ruo ogologo oge, ụlọ ọrụ ngwanrọ ahụ kewara n'etiti igwe mmadụ Software na igwe mmadụ na-eweta ngwa. Software na-ebu ma na-agba ọsọ na mpaghara gị PC / Mac. ASP bụ sọftụwia na-arụ ọrụ n'ihe nkesa ma ị na-emekọrịta site na ihe nchọgharị. Uru nke ASP bụ na ha nwere ike iwepụta ndozi na atụmatụ ọhụrụ na-enweghị itinye ihe ọ bụla na mpaghara gị. Ihe dị na ya bụ na ngwanrọ dabere na ihe nchọgharị ahụ dị oke njedebe n'ihi mmemme mmemme na njedebe nke ihe nchọgharị.
Fọdụ ezigbo ihe atụ: Lelee ịdọrọ na dobe ọrụ na nke a saịtị.
Ọ na-amasị gị MS Word? Enwere ụfọdụ ndị editọ na-enweghị atụ n’ebe ahụ na weebụ. Nke a bụ otu.
N'oge na-adịghị anya ndị na-eweta ọrụ Ngwa ga-amalite iweghara ọrụ. Enwere m ike ile anya ụbọchị mgbe ị na-agbazite Microsoft Office maka $ 9.95 kwa ọnwa karịa ịkwụ ụgwọ narị ole na ole maka ikike ọ bụla.
Dee 16, 2007 na 2: 20 AM
@Douglas: "PHP na VBScript bụ ihe atụ nke Server-n'akụkụ asụsụ."
Nke ahụ abụghị n'ezie n'ụzọ nkà eziokwu banyere VBScript. Kedu ihe ga-abụ eziokwu karịa ịsị “VBScript bụ ihe atụ nke asụsụ ederede nke ejiri mee ihe na Server-dị ka asụsụ bụ isi maka ASP Microsoft n'agbanyeghị na enwere ike iji ya dị ka asụsụ ederede ndị ahịa na Microsoft Explorer Internet Explorer."
Ee, ọ bụ ọnụ ma enwere m ike ịkọwa ya ala, mana nye ọnọdụ, gịnị kpatara ị ga-eji gbalịsie ike? 🙂